दोश्रो बजारले किन दिँदै छ हाईड्रोपावरको आइपीओलाई प्रेसर ? – Insurance Khabar
दोश्रो बजारले किन दिँदै छ हाईड्रोपावरको आइपीओलाई प्रेसर ?
प्रकाशित मिति : २७ असार २०७६, शुक्रबार १०:१७
लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा लगानी गर्नुको एक प्रमुख कारण भनेको दोश्रो बजारमा राम्रो मूल्यमा शेयर बेचेर लाभ लिनु हो। लघुवित्तको आइपीओमा लगानीकर्ताले ठुलो चासो दिनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको दोश्रो बजारमा कम्पनीहरुको आकर्षक मूल्य नै हो।
नेपाल स्टक एक्सेञ्जमा हाल ३० वटा जलविधुत कम्पनीहरु सुचिकृत भएका छन् । जसमध्ये १२ वटा हाईड्रोपावर कम्पनीको बजार मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा मुनी छ। ४० प्रतिशत जलविधुत कम्पनीको बजार मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम हुनाले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। ३० वटै हाईड्रोपावर कम्पनीहरुको औसत मूल्य एक सय ४० रुपैयाँ रहेको छ।
अहिले हाईड्रोपावर कम्पनीहरुले दोश्रो बजारमा राम्रो प्रर्दशन गर्न नसक्दा त्यसको सिदा असर कम्पनीको प्राथमिक निस्काशनमा पनि पर्न गएको छ। कुनै समय आइपीओ भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताको हानाथाप हुने गरेकोमा अहिले आइपीओको लागि राम्रै विज्ञापन गरे पनि लगानीकर्ताले हाईड्रोपावरको आईपीओमा लगानी गर्न कम रुची देखाउँदै आएका छन् ।
असार २६ गतेको बजार मूल्यको आधारमा
सानिमा इक्विटी फन्डको खुद सम्पति मूल्य बढ्यो